अभय श्रेष्ठ शनिवार, साउन २८, २०७४ 6917 पटक पढिएको
'लोकतन्त्रको अमानवीय संकटका बेला
नेपाली साहित्यमा आज अनेक समूह छन् । त्यही समूहभित्र पनि अनेक गुट छन् । ती समूह र गुटमा नरहेका वा तिनले नरुचाएका लेखक जति राम्रो लेखे पनि उपेक्षित हुन्छन् । गुटमा छिर्नेहरू नै सदैव चर्चामा रहन्छन् र तिनैले अवसर पाइरहेका हुन्छन् । (यो त्यस्तै कुरा हो जस्तो कि आजका उत्पात पढैया भनिएका व्यक्तिले शिवकुमार राईको 'डाक बंगला', केशवराज पिँडालीको 'एकादेशकी महारानी', डीपी अधिकारीको 'धर्ती अझै बोल्दैछ'जस्ता गहिरो अन्तर्दृष्टियुक्त उपन्यासको नामै सुनेका छैनन् । 'शिरीषको फूल' भनेर मरिहत्ते गर्नेहरूले पारिजातकै अर्को बेजोड उपन्यास 'पर्खालभित्र, पर्खालबाहिर' पढेका छैनन् । चर्चा र हल्लाको बजारमा राम्रा कृतिहरू अक्सर यसरी ओझेल पर्छन् । तर, युगान्तकारी त तिनै कृति ठहर्छन् !)
गोपालप्रसाद रिमाल किन अविस्मरणीय छन् भने उनले कवितामा चेतनाको मुहान खोले । भूपि किन प्रिय छन् भने उनले नेपाली समाजको चरित्रमाथि मार्मिक भाषामा युगीन व्यंग्य गरे । वासु शशीले 'देश अर्थात् देश खोइ', वैरागी काइँलाले 'मातेको मान्छेको भाषण..', विमल निभाले 'हत्यातन्त्र', 'इच्छा', श्यामलले 'छाला', 'लुतो', गोविन्द वर्तमानले 'अस्तित्वसोच', आहूतिले 'गहुँगोरो अफ्रिका', पूर्णवरामले 'गोविन्दले ठीक भन्यो', कृष्णभूषण बलले 'काठमाडौँ एक्लैले काठमाडौँ बोक्न सक्दैन', विक्रम सुब्बाले सगरमाथा 'नांगै देखिन्छ', श्रवण मुकारुङले 'अनुहार खोजिरहेछ रामभरोस'जस्ता उच्च राजनीतिक कविता लेखेकाले ती स्मरणीय छन् । 'साला पहाड मे क्या है', 'गाउँको पाठशाला', 'जर्सापको कुकुर', 'बतास'जस्ता थोरै कविता लेखेर पनि मीनबहादुर विष्टलाई प्रेमपूर्वक स्मरण गरिन्छ । 'के तपाईं मलाई चिन्नुहुन्छ महाशय'जस्ता कविता लेखेर हरि अधिकारी अनि जीवन र जगत्का अनेक विडम्बनालाई कवितामा तिख्खर वाणी दिएर शैलेन्द्र साकार स्मरणीय छन् । तर, गुट वा समूहले चर्चित बनाएका कैयन् यस्ता लेखक, कवि छन् जसका एउटै रचना सम्झनलायक हुँदैनन् ।
अनर्गल हल्ला र गुटवाजीबाट बिलकुल भिन्न दुनियाँमा रहेर समकालीन विडम्बनामाथि उच्च स्तरको राजनीतिक व्यंग्य गर्नसक्ने बेजोडा कवि हुन्- सुरेश किरण । उनको एउटा कविताको शीर्षक छ, 'घण्टाघर मसँग समय सोधिरहेछ ।' यो शीर्षकले मात्र पनि कति ठूलो कविता बोकेको छ ! पहिचान मुद्दाका सर्वाधिक अनिन्द्य कविता लेख्ने कवि हुन्- भूपाल राई । सरिता तिवारीले 'हे देवी' कवितामा कुनै युगमा शक्तिस्वरूपा नारी सामन्ती युगमा दासी हुँदै आधुनिक भोगवादी युगमा कसरी भोग र शृंगारको साधनमा परिणत भई भन्ने इतिहासको सटिक लेखा तिख्खर भाषामा उतारेकी छन् । उनले नारीको त्यस अवस्थाप्रति तीव्र विद्रोह प्रकट गरेकी छन् ।
सरस्वती प्रतीक्षाले 'तथागत, मलाई उत्खनन गर'मा बुद्ध र सुजाता सम्बन्धको प्रचलित कथाकै विनिर्माण गरेर नारीको प्रेम र उत्कण्ठाको तीक्ष्ण अभिव्यक्ति दिएकी छन् । यी कविता सरिता र सरस्वतीलाई बचाइराख्ने कविता हुन् । विनोदविक्रम केसीको 'भूमण्डलीकरण', लक्ष्मी मालीको 'आमा तिम्रो नाम के हो ? ', निभा शाहको 'दैया', केशव सिलवालको 'चिबे चरा', संगीत श्रोताको 'खुट्टा' तिनलाई सम्झाइराख्ने कविता हुन् । विप्लव ढकाल, मनु मन्जिल, भूपिन, सीमा आभास, उपेन्द्र सुब्बा, हेम प्रभास, हेमन यात्री रुचाइएका कवि हुन् ।
यता, राष्ट्रिय रूपमा सबैभन्दा प्रचारित साहित्य महोत्सवहरूमा भने सहभागी ९० प्रतिशतभन्दा बढी लेखक सुरुदेखि अहिलेसम्म उही देखिन्छन् । कार्यक्रम सञ्चालक उही । प्यानलिस्ट उही । बहसको विषय पनि उही र उस्तै । वक्ताले भन्ने कुरा पनि उही । त्यहाँ लेखनमा भन्दा बढी लेखकमा 'सेक्स अपिल' खोजिन्छ । शक्तिशाली महिला लेखकले भन्दा बढी ग्लेमरस मोडल र हिरोइनले ठाउँ पाउँछन् ।
देशकै 'बिकाउ लेखक' सहभागी हुने यी महोत्सवहरूको स्वरूप भने अझै एकजातीय, एक संस्कृतियुक्त र एकभाषिक र ब्राह्मणवादकै सिकार भएझैं लाग्छन् । त्यहाँ खस परम्पराकै नेवार कवि तीर्थ श्रेष्ठलाई त समेटिन्छ तर नेपालभाषा कविताको समृद्ध परम्पराबारे कुनै सेसन हुँदैनन् । न त नेवार समाजको संघर्ष र सांस्कृतिक लेखन गर्ने कुनै लेखक वा कवि समेटिन्छन् । त्यहाँ सीके लाललाई राजनीतिक बहसमा त समेटिन्छ तर मैथिली, भोजपुरी, अवधि साहित्यबारे कुनै बहस हुँदैनन् । न त्यहाँ थारू भाषा, साहित्यबारे कुनै बहस हुन्छन् । आहुतिबाहेक कुनै दलितको नामसमेत त्यहाँ उच्चारित हुँदैन । उनी पनि नहुँदा हुन् त दलित सौन्दर्यशास्त्रबारे कुनै छलफल हुँदैनथ्यो । थर्काउन र स्वर ठूलो गर्न नसकेका भए आजका राई, लिम्बू कविले पनि ढिम्किन पाउँदैनथे ।
ब्राह्मणवाद जातिवादकै अर्को नाम हो । महाभारतमा द्रोणाचार्यले 'क्षत्रीय राजकुमारलाई मात्र धनुर्विद्या सिकाउँछु, शूद्रलाई होइन' भनेर निषाध कुलका एकलव्यलाई अस्वीकार गर्नु, द्रौपदीले सूतपुत्रलाई पति मान्दिनँ भनेर मत्स्यवेद प्रतिस्पर्धाबाट कर्णलाई बहिष्कार गर्नु, अर्जुनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न क्षत्रीय राजकुलकै हुनुपर्छ भनेर कृपाचार्य र कुरुराज्यका भारदारले कर्णलाई अस्वीकार गर्नु नश्लवाद थियो ।
पहिचानका मुद्दामा सबैभन्दा गम्भीर र शक्तिशाली कविता लेखिरहेका भूपाल राईसमेत तिनको सूचीमा नपरेको देखिन्छ । कवितामा अत्यन्त शक्तिशाली उपस्थिति जनाएका र पहिचानका मुद्दा उठाइरहेका नेपालभाषाका कवि त तिनको सूचीमा पर्ने कुरै भएन । तर, एकसरो परीक्षण पनि नभएका कविलाई 'शक्तिशाली कवि'को सूचीमा राखेर तिनले उपद्रै गरेका छन् ।
नेपाल प्रजा परिषद्ले गरेको राणाविरोधी आन्दोलनका क्रममा कतिलाई जन्मकैद, कतिलाई फाँसी र कतिलाई देश निकाला गरियो । नेवार समुदायका केही व्यक्ति भने विशुद्ध भाषासेवाका कारण पक्राउ परेका थिए । नेपालभाषामा कवितासंग्रह निकालेको निहुँमा चित्तधर हृदयलाई ६ वर्ष कैद र नेपालभाषामै 'वर्षा' शीर्षक आपत्तिजनक कविता लेखेको भन्दै सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई १२ वर्ष कैद सजाय सुनाइयो । फत्तेबहादुर सिंहले त आफूले मात्र लेखेको नभई सबैको कविता जम्मा गरेर नेपालभाषामा कविता संकलन निकालेकाले जन्मकैद र सर्वस्वहरणको सजाय सुनाइयो ।
जब कुनै विचारलाई आन्दोलनको रूप दिइन्छ, त्यहाँ 'व्यक्तिवादिता' निरर्थक हुन्छ । तर, प्रगतिशील भनिएका लेखकमा जस्तै यहाँ पनि त्यही कुरा प्रभावी छ । यस्तो हुँदा कुनै स्रष्टाले शक्तिशाली कृति लेख्दा त्यसप्रति सामूहिक स्वामित्व र गर्वबोध गर्नुभन्दा बढी त्यो मैले वा मेरो मान्छेले लेखेको हो कि होइन भन्नेले कुराले बढी महत्र्व पाउँछ ।
नश्ल चेतको अवधारणा ब्राह्मणवादको अवधारणासँगै सुरु भएको हो । ब्राह्मणवाद वर्ण व्यवस्थाबाट सुरु भयो । भारतीय समाजशास्त्री डा. विजयकुमार त्रिशरणका अनुसार वर्ण व्यवस्थाको उल्लेख झन्डै पाँच हजार वर्षअघि सर्वप्रथम ऋग्वेदको पुरुषसूक्तमा भएको हो । ऋग्वेदको दसौं मण्डलको ९०औं सूक्तमा पुरुषसूक्तको वर्णन छ । त्यसको एक स्तुतिअनुसार आदिपुरुष प्रजापति ब्रह्माको उत्पत्ति सृष्टिपूर्व नै भइसकेको थियो । उनका सन्तान देवताहरूले उनलाई 'दैविक बलि' चढाए ।
फलस्वरूप ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण, हातबाट क्षत्रीय, जाँघबाट वैश्य र खुट्टाबाट शुद्र उत्पत्ति भए । त्यसैगरी, मुखबाटै इन्द्र र अग्नि, मस्तिष्कबाट चन्द्रमा, आँखाबाट सूर्य, श्वासबाट हावा, नाभीबाट वायु अनि यही 'दैविक बल'बाट 'पवित्र सिद्धान्त' उत्पत्ति भयो । पुरुषसूक्तको मन्त्र संख्या ११ र १२ मा चार वर्णको उत्पत्ति ईश्वरले नै गरेको मात्र उल्लेख छ । यसैलाई यजुर्वेद र अथर्ववेदमा पनि उल्लेख गरियो । उत्तरवैदिक हिन्दु धर्मग्रन्थहरूले वर्णलाई चार सामाजिक वर्गको प्रतिनिधिका रूपमा व्याख्या गरे ।
ब्राह्मणवादप्रति असहमति राखेर विद्रोह गर्ने सम्भवत: पहिलो उल्लेख्य व्यक्ति बुद्ध थिए । उनले आफ्नो संघमा उपाली, सुनीत, स्वास्तीलगायत शूद्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर वर्ण व्यवस्थालाई धुलो चटाइदिए । त्यसकै प्रतिरक्षाका रूपमा ब्राह्मण राजा पुष्यमित्रको कालमा मनुद्वारा ईश्वी पूर्व १५० मा रचित 'मनुस्मृति' आयो । यसमा चार वर्णको विस्तारित व्याख्या र विशेष वर्णन गरियो । यसलाई हिन्दु समाजको दण्ड विधानका रूपमा व्याख्या गरी पहिलोपल्ट संस्थागत गर्ने काम भयो । भारतीय मानवशास्त्री चन्द्रभान प्रसादका अनुसार, यसमै पहिलोपल्ट शूद्रमाथि सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक निषेधको व्यवस्था गरियो ।
विचारका पक्षधरहरू प्रतिगामी हुन सक्दैनन् । तर, आफैंलाई मुक्त गर्न नसक्नेले समाज र देशलाई ब्राह्मणवाद, जातिवाद, भाग्यवाद र ठालुवादबाट मुक्त गर्न सक्दैन । अनि मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टको बहुचर्चित व्याख्या 'फ्याटालिज्म' को सिकार ती आफै हुन पुग्छन् । तपाईं ब्राह्मण हुनुस् वा राई, लिम्बू, नेवार वा दलित जेसुकै हुनुस्, मनभित्र संस्कारका रूपमा बेरिएर बसेको ब्राह्मणवादलाई नमिल्काएसम्म तपाईं कसरी ब्राह्मणवादविरुद्ध लड्न सक्नुहुन्छ महोदय ?
कर्मचारी समायोजन नियमावली चाँडै 5938
'हेबीवेट' नेताका प्रतिस्पर्धी हेबीवेट नै 29742
डेंगु संक्रमणबाट एकको मृत्यु 213
२० हजार घुससहित तीन नासु पक्राउ 5122
प्रविधि पत्रकार मञ्‍चको अध्‍यक्षमा रेग्मी सर्वसम्‍मत 1075